Muxuu ahaa heshiiska ay kala saxiixdeen dowladaha Itoobiya iyo Ruushka? | HalQaran.com
Home Warar Xiiso Leh Muxuu ahaa heshiiska ay kala saxiixdeen dowladaha Itoobiya iyo Ruushka?
Muxuu ahaa heshiiska ay kala saxiixdeen dowladaha Itoobiya iyo Ruushka?
Dowladaha Itoobiya iyo Ruushka oo heshiis kala saxiixanaya.
Addis Ababa (Halqaran.com) – Dowladaha Itoobiya iyo Ruushka ayaa kala saxiixday heshiis iskaashi milatari, kadib wadahadal saddex maalmood qaatay, sida ay sheegtay warbaahinta Fana News.
Waaxda dhaqaalaha ee ciidamada difaaca ee Itoobiya ayaa saxiixay heshiiskan, kaas oo ay ku sheegtay inuu sare u qaadi doono xiriirka soo jireenka ah ee labada dal.
Dibadbaxayaasha ayaa u sacab tumay Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo hoggaamiyaha Shiinaha Xi Jinping.
Si kastaba, maamulka Biden ayaa xayiraad ku soo rogay fiisooyinka iyo kaalmada dhaqaale ee dowladda Itoobiya.
Hesiiska Itoobiya iyo Ruushka